रासायनिक मल भण्डारण र वितरणमा समस्या : कृषि मन्त्रालय « Image Khabar
रासायनिक मल भण्डारण र वितरणमा समस्या : कृषि मन्त्रालय
Imagekhabar ११ आश्विन २०७८, सोमबार १५:३६
काठमाडौं, असोज ११ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलेका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल भण्डारण र वितरण भएको बताउनुभएको छ ।
मलखाद व्यवसायी संघ नेपालको पाँचौं साधारण सभा तथा दोस्रो महाधिवेशनमा बोल्दै कृषि विकास सचिव आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल स्टोरेज र वितरण भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार गुणस्तर र नियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने कुरालाई ठूलो बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
कृषि विकास सचिव आचार्यले नेपाली आयातकर्ताहरुले पछि दिएपनि हुने मललाई समय भन्दा अघि नै मल दिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले मलमा कृषकहरुका लागि फार्म, फर्म र फ्याक्ट्रीको आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि वितरण व्यवस्थापन, सप्लाइ र समुचित व्यवस्थापनको अत्याधिक भूमिका र महत्व रहेको औंल्याउनुभयो ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले मलखादलाई सहकारी बाहेकको जस्तो संगठन बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले मलखादले विधान परिमार्जन गर्ने कुरा गरिरहेको भन्दै संगठनलाई खुला बनाएर लैजान अनुरोध गर्नुभयो ।
बागलुङ-घोडाबाँध सडक कालोपत्रेका नहुँदा नागरिकलाई सास्ती
सत्ताको साँचो बोक्ने दल कांग्रेस नै अवैध ! संरचना कब्जाका लागि ‘क्रियाशील’को कर्तूत
बाढी, पहिरो र डुबान पीडितका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने प्रधानमन्त्रीकाे घोषणा
पार्टी संरचना कब्जा गर्ने फोहोरी खेलमा नेतृत्व लाग्दा कांग्रेसमाथि अवैधको प्रश्न उठ्यो–प्रकाशमान सिंह
डम्मर बुढा मगर बागलुङ । बागलुङ–घोडाबाँध सडक कालोपत्रेका लागि वर्षौँ अगाडीदेखि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । समय–समयमा स्थानीय
यस्तो बेथिति र अराजक अवस्था कांग्रेसको जीवनमा अहिलेसम्म सायदै आएको थियो । चार वर्षका लागि सभापतिमा चुनिएका देउवा र वर्तमान कार्यसमितिले संवैधानिक संकटले दिएको अवधिसमेत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी, पहिरो तथा डुबान पीडितका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ ।
मनोज गजुरेलले गाँसे लगनगाँठो, चार वर्षपछि मञ्जुले थामिन् हात
बिजुलीको बक्यौता बुझाउन नसकेपछि अफगानिस्तान पुरै अन्धकार हुने खतरा
अफगानिस्तानका शहरका चार चोकमा चार व्यक्तिका शव झुन्ड्याइयो
Chief Editor: Rajan Kuikel